सगरमाथा चुचुरोमा ट्राफिक जाम ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
सगरमाथा चुचुरोमा ट्राफिक जाम !
हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भएसँगै भनियो, यो पटक सगरमाथामा ट्राफिक जाम छ । सामान्यतः मौसम राम्रो भएका बेला हिमाल चढ्न चाहनेहरु धेरै हुने भएकाले त्यसलाई सांकेतिक रुपमा ट्राफिक जाम भनिएको हो । तर, आरोही निर्मल पूर्जाले खिचेको एउटा तस्वीरले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनायो, ‘के यो साँच्चै हो ? प्रश्न नगरुन पनि किन ? तस्वीरमा सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेक्न चाहने आरोहीहरुलाई निकै लामो लाइन देखिन्छ । तर, यो तस्वीर वास्तविक भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पूर्वबेलायती सैनिक समेत रहेका म्याग्दीका पूर्जाले प्रोजेक्ट पोसिबल–१४ र ७ अभियानका दौरान सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल एकै सिजनका ७ महिनामा आरोहण गर्ने लक्ष्य लिएका उनले ८ जेठमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । उक्त दिन सगरमाथा चुचुरो चुम्ने आरोहीको यति ठूलो लाइन बन्यो कि झण्डै ‘क्याम्प ४’ देखि चुचुरोसम्म आरोहीको बाक्लो लाइन देखिन्छ । सगरमाथा आधार शिविरमा सरकारी टोलीका एक सदस्य तथा सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ७ जेठसम्म करीव ६ सय आरोही चुचुरोसम्म जान उपयुक्त मौसमको पर्खाइमा थिए ।
७ जेठको बिहानबाट मौसम अनुकुल भयो । आरोहण खुल्यो । ९ जेठमा सर्वा्धिक आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको अनुमान छ । यद्यपि सबै आरोही कुन दिन चढे भन्ने यकिन तथ्यांक आइपुग्न भने केही समय लाग्ने पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा बताउँछन् । ८ जेठका दिन करीव २ सय आरोही चुचुरोमा पुगेको अनुमान छ । यो तस्वीर सोही दिनको हो । त्यहीका कारण आरोहीहरु सगरमाथाको शिखरमा पुग्न मात्र होइन, फर्किने बेला समेत घन्टौं जाममा परेका थिए । यसअघि ३ जेठ, २०७३ मा एकै दिन सर्वा्धिक २ सय ५ आरोही चुचुरोमा पुगेको कीर्तिमान छ ।